Ungangibonisa ukuthi i-Google rankings ihlobene kanjani nedatha ye-backlink yami?
Ngamashumi ayishumi amuva nje, isabelo sezingonyama zabanikazi bewebhusayithi nabasunguli bewebhu babangele izixuku ezinkulu ze-spammy nezinambuzane ezikhohlisayo - konke ngenxa yezikhundla eziphakeme eziphezulu kuma-SERP e-Google. Ngenxa yalokho, cishe eminyakeni emihlanu eyedlule injini enkulu yokusesha inikeze ukubuyekezwa kwayo kokuqala kwe-Penguin - ukuqala ukufaka i-PENIN kanye ne-indexing eziningana ze-PBNs (amanethiwekhi wangasese ebhulogi), amapulazi akhiqiza ngokuzenzakalelayo, amasondo okuxhumanisa (ukushintshana), kanye nokukhulisa ifulegi elibomvu nebhulogi yezihambeli ngezinhloso zokwakha isixhumanisi. Yingakho ngisho nokuphambuka okuncane okuvela ezinkombandlela eziyinhloko ze-Google ezingxenyeni ezingekho emthethweni, ze-spammy noma ezikhohlisayo manje kungaphonsa iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ekusezingeni lesigwebo sejele.
I-Google Ikhuluma Ngezixhumanisi Ezinhle Ezivela Kubabi
Into yokuqala ebonisa ukuhlanganiswa okuqinile phakathi kwedatha yakho ye-backlink kanye nesimo sangempela se-Google Izwe lanamuhla lewebhu ligcwele izixhumanisi. Eziningi zazo zikhiqizwa ngamarobhothi e-intanethi. Amanye adalwe ukuthengiswa kwe-bulk noma okuhloswe ngamadili wokushintshaniswa ngabanye. Ngesikhathi esifanayo, ezinye izixhumanisi zingahle zihlelwe kahle ukuze zibukeke njengemvelo ngangokunokwenzeka, ezinye zazo yizo izixhumanisi zokuhlela esikoleni esidala. Ngakho-ke, inselele enkulu ku-Google ukuhlolisisa imininingwane ye-backlink yonke yewebhu noma ibhulogi - ukuqonda ukuthi ubani odlala umdlalo onembile futhi empeleni kufanele abe yizinga eliphezulu.
I-Backlinks Database kanye Nezenzo Zangempela
Eqinisweni, lapho izinjini ezinkulu zokusesha njenge-Google ngokwayo zibona isixhumanisi esibonisa indlela eya kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi, kunezinketho ezintathu kuphela zangempela kwi-backlink ngayinye unayo. Ngisho ukuthi kungabonakala sengathi ivumelekile futhi kufanelekile ukucubungula ku-algorithm yokusesha okuyinhloko ye-Google. Ngesikhathi esifanayo, yonke into ingakwazi ukuhlala ingalingani-futhi ezinye izixhumanisi zingabonakala njengezansi futhi zingekho - ngaphandle komthelela kumbono we-SEO. Ngempela, iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ingase iphinde ihlawulwe, uma inxenye yezixhumanisi zakho kumininingwane yakho yangemuva (noma isixhumanisi esisodwa kuphela) kusolakala ukuthi iyinhlobo yokukhohlisa noma yokufakelwa.
Amaqiniso Okubamba Nge-Rankings ne-Backlinks Database
Ngakho, kukhona ubuhlobo obuthile phakathi kwesimo sangempela kwi-SERP kanye neseva ye-backlinks database. Kodwa kungaba kanjani okuqinile? Nasi uhlu lwamaphoyinti e-bullet ukuze ubonise ukuthi izixhumanisi zangaphandle zenzani ngezikhundla zakho esikalini.
izikhundla eziphakeme kuma-SERP zihambisana nombolo yemithombo yokuxhumanisa cishe okungama-30 ngokwesilinganiso;
lokhu kulinganiswa kokulinganisa kungabonakala kuhlaba umxhwele nakakhulu, ngenxa yokuthi ukuhlangana okuncane akumangazi futhi - ucabangela ukuthi i-Google ingathembela cishe ku-200 ukubeka uphawu;
ngaphezulu kwezingu-99% kuwo wonke amawebhusayithi nama-blogs abuyekezwe ucwaningo lwamacala asanda kubonakala sengathi okungenani unesixhumanisi esingaphandle esisodwa esingaphakathi;
cishe ngamaphesenti angama-22 wamakhasi atholakalayo ahlukaniswe kahle ngaphandle kwama-backlink wangaphandle nhlobo;
ukuba nezixhumanisi eziningi zingalingana nesikhundla esiphakeme sezinga, kodwa ukubheja kunomboro wabo kunekhwalithi akusho ukuthi iwebhusayithi yakho izoboniswa phezulu kosesho Source .